Betwinner : Ukufikelela kunye nokuPhononongwa
[email protected] | +44 203 9362996 | Inkxaso yomjikelo weewotshi
Betwinner : Indawo esemthethweni
Betwinner ngumnini Betwinner entsha. Indawo esemthethweni inemibala ethandekayo, yanamhlanje, iyaqondakala kwaye iyafumaneka lula. Iibhonasi zokwamkela ezona zikhulu zabadlali abatsha (ukuya kuthi ga kwi-100 yeedola) nenkxaso ejikelezwe betwinner lokwenza betwinner yenye yeemveliso zokubheja ezilungileyo.
Ngelishwa, namhlanje kunzima kakhulu ukufumana uphawu oluthembekileyo kwimarike yokubheja iimveliso ezingayi kumkhohlisa umdlali. Ukuthintelwa rhoqo kweeakhawunti, ukunciphisa inani lendawo yokubheja kunye nezicelo zazo zonke iindidi zamaxwebhu xa kuhlawulwe kuye kwashukumisa igama kwintengiso yokubheja kwezemidlalo. BetWinner zonke izinto zakudala. Sinomdla kumsebenzisi wemveliso yethu - umdlali. Ke ngoko, senza yonke into ukuze kube lula ukubheja ngabathandiweyo.
Betwinner ukufumana indlela yokusebenza kwindawo
Enye yezibonelelo BetWinner sisipili sayo, esingazange sivalwe. Ungangena kwindawo esemthethweni ngaphandle kweengxaki ngokufaka igama elithi " betwinner " kwi-injini yokukhangela. Ukusuka kwiziphumo zokuqala zokukhangela, ungaya kuhlobo olusebenzayo lwendawo, ngelixa kwezinye iimveliso kuya kufuneka ujonge ikhonkco olisebenzayo ukwenza ukubheja.
Ikhonkco leBetwiner lihlala lisebenza. Sakha uhlobo olwahlukileyo lwendawo nganye nganye yabadlali bethu ukuze ungabi nzima ukungena. Ukongeza, ungasebenzisa usetyenziso lweselfowuni, apho kwimodi ebukhoma ngokuqinisekileyo uya kungena kwiakhawunti yakho kwisayithi.
Khuphela i- betwinner kwifowuni yakho
Sikhathalela ukuhamba kwemveliso yethu. Ungasebenzisa umntu betwinner kunye nazo zonke iintlobo zezixhobo: betwinner , betwinner , iikhompyuter, isikhangeli kwiTV. Siphuhlise ukusetyenziswa kwesoftware kwezi ndlela zilandelayo zamaqonga:
Ukusetyenziswa kwe-Android (apk)
IPhone App (i-iOS)
Isicelo seekhompyuter kunye neelaptops (iiWindows)
I- betwinner app ye-android kwifomathi ye-apk iyafumaneka ukuze betwinner olusemthethweni lwendawo. Kufuneka nje uye kwisiza. Ngasekunene kwe-logo uza kubona iqhosha "ukusebenzisa i-smartphone." Landela imiyalelo kwiphepha kwaye usebenzise ikhonkco lokukhuphela.
Ifayile yesicelo yenzelwe bonke ubungakanani beentwana kunye neentlobo zezixhobo. Kuthetha ukuba ungafaka i- betwinner kungekuphela kwifowuni yakho ye-android, kodwa betwinner .
Umyalelo wokufaka betwinner kwi-iPhone betwinner ye-android. Zonke ezifanayo-cofa iqhosha "isicelo se-smartphone" ecaleni kwelogo kwaye ulandele imiyalelo.
Iqonga lomnqamlezo lisebenza apha kuphela kwiifowuni ezivela kwiapile. Ayichaphazeli ezinye izixhobo, ezinje nge-imac kunye neMacbook. Sebenzisa inguqulelo yewebhu kwezi zixhobo.
Enye yemibuzo ehlala Betwinner yokukhangela yikhowudi yokunyusa Betwinner . Inika ntoni? Kutheni ifuneka? Ikhowudi yokunyusa ingena ngexesha lokubhalisa kwiwindows ekhethekileyo. Kuxhomekeka kwikhowudi promo ethile, unikwa uhlobo olwahlukileyo lwebhonasi-inokuba yifreebet, ibhonasi kwidipozithi yakho yokuqala, ukubheja simahla okanye enye ibhonasi.Apha ngezantsi siqokelele zonke iintlobo betwinner kwikhowudi yokunyusa betwinner .
Uhlobo lweebhonasi Ubungakanani bhonasi Betwinner yeBetwinner
Ibhonasi yokuQala yokuQala ukuya kuthi ga kwi-100 yeedola (100%) BETW1N
Ukubheja ngokukhululekileyo ukuya kuthi ga kwi-100 yeedola (100%) BETW1N
I-inshurensi yokubheja ukuya kuthi ga kwi-50 $ (100%) BETW1N
Ibhonasi yomatshini otyibhile (ii-spins zasimahla) ukuya kuthi ga kwi-25 $ (100%) BETW1N
Toto ukuya kuthi ga kwi-25 $ ₽ (100%) BETW1N
Poker ukuya kuthi ga kwi-25 $ (100%) BETW1N
Ikhowudi yepromo isebenza kuzo zonke iintlobo zeebhonasi kubhaliso. Ngena nje kuyo ukufumana ibhonasi kwaye uqale ukubheja kwimidlalo. Kwakhona qaphela ukuba kukho iindawo ezinamaphepha-mvume okushicilelwa kweekhasino kunye namagumbi eepoker ngabathengisi bobomi.
Betwinner ungene kwaye ubhalise kwiwebhusayithi esemthethweni
Betwinner ine-interface ecacileyo Betwinner . Sizamile ukwenza lula kangangoko kunokwenzeka zonke iinkqubo. Ukuba unengxaki zokubhalisa okanye zokungena =, ungahlala unxibelelana nathi. Sisebenza ngewotshi yakho kwaye sikulungele ukuphendula yonke imibuzo ngokukhawuleza.
Inkqubo yobhaliso yenziwe lula, kwaye ineendlela zobhaliso ezinje "ngokubhaliswa nje okukanye". Kufuneka ufake inombolo yefowuni, kwaye ufumane igama lomsebenzisi kunye negama lokugqitha kuyo. Ezinye iindlela zobhaliso zingezantsi:
Ubhaliso kwiinethiwekhi zentlalo kunye nabathunywa (kubandakanya i-whatsapp kunye ne-telegraph)
Njengoko Betwinner ngaphambili, Betwinner olubanzi Betwinner ezahlukeneyo- phakathi kwazo iibhonasi zokuqala zomdlali ngamnye, ukubheja kwamahhala, i-inshurensi yokubheja, iikhowudi zokubheja ngokubheja. Unokuhlala ufumana ulwazi malunga nokunyusa okwangoku kwicandelo lewebhusayithi "Promo".
Icandelo lePROMO lenzelwe abaqalayo kunye nabadlali abanamava. Apha unokuhlala ufumana imidlalo yebhonasi, ukukhuthaza okutsha, ulwazi malunga nokugcinwa kweekhowudi zentengiso kunye neziganeko zentengiso zamva nje ezifanelekileyo. Ukuba unayo nayiphi na ubunzima malunga nokufumana iibhonasi kunye nokunyuselwa kwindawo, unokuhlala unxibelelana neqela lenkxaso. Bayakukunceda kwaye bakuncede ngayo yonke imibuzo yakho.
Kubaluleke kakhulu ukufumana ulwazi kwabanye abadlali abanamava kunye nemithombo edume ngathi. Ngaba bayakuthanda ukusebenza nemveliso yethu? Ngaba Betwinner kunye nokungalunganga Betwinner . Apha siqokelele uphononongo oludumileyo oluza kukunceda uqonde amandla enkampani yethu yokubheja.
Ngumbhuki othembekileyo. Sele ndidlala unyaka, akukho ngxaki.
Ukugqibelele. Inkxaso isebenza ngokukhawuleza, umgca ubanzi, ii-coefficients zilungile. Ukuqinisekiswa kudlule ngokukhawuleza kwaye ngaphandle kweengxaki. Ndiyayithanda yonke into.
I-akhawunti isetyenzisiwe ixesha elide. Kwiveki ephelileyo, ndibenegalelo lama-25 eedola apho, ndibanyusela kwi-73 $. Emva kwalonto ndifumene isicelo samaxwebhu. Inkxaso eposini yaphendula ngokukhawuleza ngokwaneleyo. ngenxa yesiphoso sam (hayi umgangatho olungileyo wefoto) kukho ukulibaziseka ekuqinisekiseni ukuqinisekiswa. Ngexesha lokulinda, ndaphumelela i-760 $ (malunga nosuku). Kwaye xa bathi bayivuma loo dokhumenti ndayifumana imali yam. Ndasusa yonke imali kwiakhawunti, kwakungekho ukubheja okutshintshileyo, akukho ezinye ii-chips ezingalunganga, ngenxa betwinner . ukuba ibingengobunzima obuphazamisekileyo kunye nokubheja okukhulu ekugqibeleni, kuya kuba kuhle ngakumbi ukuqhubeka nomthengisi onjalo othembekileyo.
Ngaba unayo into oyithethayo? Yiya kwi-portal yababhuki, kwaye uthumele umbono wakho. Sisebenza sisebenzela udumo kwaye sisombulula yonke imiba.
BETWINNER (nguMarikit Holdings Ltd. HE351206), eChrysanthou Mylona 12, eHarmonia Building, ibhloko 1, kwiflethi / kwiofisi 15, 3030 Limassol, eCyprus.
BETWINNER isebenzisa ikuki. Ukuba uhlala kwiwebhusayithi, uyavumelana nale ngxelo.Fumanisa Okuninzi